Rakotonarivo Thierry: “Tsy voatery hiala…” | NewsMada
Rakotonarivo Thierry: “Tsy voatery hiala…”
“Tsy voatery hametra-pialana ny filohan’ny Antenimierampirenena raha mirotsa-kofidina amin’ny fifidianana eto Madagasikara.” Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, ny amin’ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Antenimierampirenena na tsia noho ny maha kandidà filohan’ny Repoblika azy.
Fanjakana tan-dalàna isika ka voafaritry ny lalàna ny mahakasika ireo kandidà tokony hametra-pialana amin’ny asany. Eo ihany koa ireo kandidà tsy mametra-pialana fa maka fahazoan-dalana manokana tsy hiasa, araka ny nambarany.
Ny momba ireroa kandidà tokony hametra-pialana àry, milaza ny lalàmpanorenana fa ny filoham-pirenena am-perinasa sy ny mpikambana eo anivon’ny governemanta, ao anatin’izay ny praiminisitra, no tsy maintsy mametra-pialana raha mirotsa-kofidina amin’ny fifidianana atao eto Madagasikara.
Mametraka fahazoan-dalana manokana tsy hiasa kosa ny mpiasam-panjakana, raha mirotsa-kofidina amin’ny fifidianana. Raha izay lalàna izay, tsy voatery hametra-pialana ny filohan’ny Antenimierampirenena raha mirotsa-kofidina.
Tsy fantatra intsony ny tena marina
Manoloana izany, miampy ny fanazavan’ny mpahay lalàna iray etsy ambony: ho an’ny olom-pirenena tsotra, tsy fantatra intsony izay tena marina azo ekena sy arahina. Toa arakaraka ny fisian’ny fanazavana etsy sy eroa no vao mainka mampisafotofoto…
Mba misy ve ny fandalana ny soatoavina repoblikanina sy ny etika politika amin’ny fanaovana politika eto Madagasikara? Indrindra amin’ny fiatrehana fifidianana toy izao… Hanao ahoana raha samy manana ny filazany sy manao izay saim-pantany avy?